Duulimaadyo dheeraad ah oo ku socda Bonaire oo ka imanaya USA kuna socda Delta, American iyo United hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Duulimaadyo dheeraad ah oo ku socda Bonaire oo ka imanaya USA kuna socda Delta, American iyo United hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Shirkadda Dalxiiska Bonaire (TCB) ayaa ku dhawaaqaysa jadwalka duulimaadyada ee American Airlines, Delta Air Lines, iyo United Airlines bilaha soo socda.
Delta Air Lines iyo American Airlines labaduba waxay arkeen isbeddel wanaagsan iyo ballansashada dalabka jasiiradda.
United Airlines ayaa dib u bilaabi doonta duulimaadyadii Bonaire ee Houston iyo Newark bisha November.
Jasiiradda Caribbean -ka ee Bonaire ee Dutch -ka ayaa soo dhoweyneysa soo noqoshada duulimaadyada rakaabka ganacsi ee Mareykanka.
Ka dib markii si guul leh dib loogu bilaabay duulimaadyadii ka yimid Mareykanka bishii Juun kuna sii jeeday Jasiiradda Caribbean ee Bonaire, Shirkadda Dalxiiska Bonaire (TCB) waxay ku dhawaaqeysaa jadwalka duulimaadyada ee American Airlines, Delta Air Lines, iyo United Airlines bilaha soo socda.
Iyada oo qayb ka ah Qorshahayaga Soo -kabashada Dalxiiska, Shirkadda Dalxiiska Bonaire waxay sii wadi doontaa dadaalladan si ay mar walba u arkaan kor u kaca booqdayaasha jasiiradda, iyo dhaqaalaha maxalliga ah.
Labada Delta Air Lines, iyo American Airlines ayaa arkaya isbeddel wanaagsan, iyo ballansashada baahida jasiiradda. Marka, tani waa fursad weyn oo lagu kordhinayo tirada duulimaadyada Bonaire.
Hadda ilaa Noofambar 20, 2021; Delta waxay leedahay duulimaad Sabti toddobaadle ah oo loo qorsheeyay Bonaire oo ka timaadda Atlanta, Georgia, duulimaadkan toddobaadlaha ah wuxuu ku kordhayaa laba duulimaad toddobaadle ah Arbacada iyo Sabtida inta u dhaxaysa Noofambar 24, 2021 -December 15, 2021. Kadibna wuxuu bilaabmayaa December 18, 2021 illaa Janaayo 4, 2022 waxaa jiri doona duulimaad maalinle ah marka laga reebo Talaadada. Laga bilaabo Janaayo 5, 2022 illaa Abriil 9, 2022 waxaa jira jadwalka duulimaadka Isniinta, Arbacada, Jimcaha iyo Sabtida.
Jadwalka duulimaadka American Airlines ee hadda socda illaa Nofeembar 6, 2021 waa laba duulimaad toddobaadle ah Arbacada iyo Sabtida laga bilaabo Miami, Florida. Laga bilaabo Noofembar, 2021 illaa Janaayo 3, 2022 duulimaad Isniin ah ayaa lagu dari doonaa safarka. Sidoo kale, waxaa jiri doona duulimaadyo maalinle ah oo taga Bonaire inta lagu jiro xilliga fasaxa, laga bilaabo Diseembar 16, 2021 illaa Janaayo 3, 2022.
6 -da Noofembar, 2021 United Airlines ayaa duulimaadyadeedii dib uga bilaabi doonta labada Houston, Texas iyadoo duulimaad toddobaadle ah ku aadi doonta Bonaire Sabtida iyadoo duulimaadna soo noqon doonta Axadda, iyo duulimaadka Sabtida toddobaadlaha ah ee Newark, New Jersey.